एमाले र माओवादी केन्द्र अब पुरानै बाटोमा ; के होला आफ्नो पार्टी छाडेर अर्को समुहमा गएका यी नेताको भविष्य ? यस्तो देखियो सम्भावना : – Sadhaiko Khabar
एमाले र माओवादी केन्द्र अब पुरानै बाटोमा ; के होला आफ्नो पार्टी छाडेर अर्को समुहमा गएका यी नेताको भविष्य ? यस्तो देखियो सम्भावना :
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण २३, २०७७ समय: २०:१०:१२
काठमाडौं/ सर्वोच्च अदालतले साबिकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दल दर्ता प्रचलित कानुनअनुसार नभएको भन्दै खारेज गरिदिएसँगै सो पार्टीका केही नेताको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्न उठेको छ ।
माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न वा छुट्टै पार्टी खोल्न तत्कालीन एमालेको संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको सहमति आवश्यक पर्छ। संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य नरहेको ठानिएका नेपाल–खनाल पक्षलाई आइतबारको फैसलाले थप संकटमा पारेको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले बताए।
अदालतको फैसला पछि ओली र प्रचण्डको आयो यस्तो प्रतिकृया:-